China Painter's Tape fekitori uye vagadziri | Newera
Yakapetwa-mativi tepi inogadzirwa bepa, jira, epurasitiki firimu seiyo substrate, uyezve iyo elastomer-yerudzi rwemanikidza-inonamira inonamira kana resin-mhando yekumanikidza-inonamira inonamira yakaenzana yakaputirwa pane iri pamusoro substrate. Iyo tepi-yakasungirirwa tepi yekunamatira ine zvikamu zvitatu: substrate, adhesive uye pepa rekuburitsa (firimu).
maficha uye mashandisiro
Temperature nemishonga， °C
（Tensile simba ）N / cm
180°peel simba N / cm
Anonamira akanaka, hapana masara, anogara kwenguva refu，Yakawanda-tembiricha uye yakawanda-tembiricha inowanikwa，kupenda mota，kupenda kwemotokari kupenda。Yakakwira tembiricha yekuvhara tepi inoshandiswa muindasitiri yemagetsi.
Pakati-tembiricha Masking tepi
Yakakwira-tembiricha Masking tepi
Kunamatira kwakanaka; Hakuna masara; Matain simba rakanaka; Wide inoshanda tembiricha renji; Zvipfeko zvakapfava uye zvimwe zvinhu.
Inoshandiswa kuputira, kupenda kwemukati; kupenda mota; kupenda kwepamusoro-tembiricha mune emagetsi indasitiri uye kushongedza, diatom kubuda, kuputira chivharo chekudzivirira senge mota, zvigadzirwa zvemagetsi, tambo, hofisi, kurongedza, hunyanzvi hwekudhirowa, pendi, nezvimwe.
Masking tepi tambo yakasungirirwa-yakanamatira tepi yakagadzirwa ne masking bepa uye yekumanikidza-inonamira kunamira seyakanyanya mbishi zvigadzirwa. Iyo yekumanikidza-inonamira inonamira yakaputirwa pane masking bepa uye rimwe divi rakaputirwa neanti-kunamira zvinhu. Iine hunhu hwekupisa kwakanyanya kupisa, kumira kwakanaka kumakemikari solvents, yakanyanya kunamatira, mbatya nyoro uye hapana yakasara glue mushure mekubvaruka. Iyo indasitiri inowanzo kuzivikanwa se masking bepa kumanikidza-inonamira namira tepi.
1. Iyo yekunamatira inofanirwa kuchengetwa yakaoma uye yakachena, zvikasadaro inokanganisa kunamatira mhedzisiro yetepi;
2. shandisa rimwe simba kuti riite tepi uye vateveri vawane musanganiswa wakanaka;
3. Kana iro basa rekushandisa rapera, iyo tepi inofanirwa kusvuurwa nekukurumidza sezvazvinogona kudzivirira izvo zvinoitika zvekusara kweglue;
4. Matepi anonamira asina anti-UV mashandiro anofanirwa kudzivirira kubuda kwezuva uye kusara kweglue.
5. Mamiriro ezvinhu akasiyanasiyana uye zvinhu zvakasiyana zvinonamira, iyo tepi imwechete inoratidza mhedzisiro dzakasiyana; zvakaita segirazi. Simbi, mapurasitiki, nezvimwewo, zvinofanirwa kuyedzwa zvisati zvashandiswa muhuwandu hwakawanda.
Pashure: Kugadzira Tepi
Zvadaro: Washi Tape
Nhema Masking Tepi
Bhuruu Masking Tepi
Yakadzika Tack Masking Tepi
Masking Tepi Bhokisi
Masking Tepi Dispenser
Masking tepi dzakateedzana
Masking Tepi Nepurasitiki